Okukhombayo: Izibalo Zamakhasimende Ezinemininingwane Esetshenziswayo | Martech Zone
Idatha enkulu ayiseyona into entsha ezweni lebhizinisi. Izinkampani eziningi zizicabangela njengabantu abaqhutshwa idatha; abaholi bezobuchwepheshe basetha ingqalasizinda yokuqoqwa kwedatha, abahlaziyi bahlunga idatha, futhi abathengisi nabaphathi bemikhiqizo bazama ukufunda kulwazi. Ngaphandle kokuqoqa nokucubungula idatha eningi kunanini ngaphambili, izinkampani zilahlekelwe imininingwane ebalulekile ngemikhiqizo yazo namakhasimende azo ngoba azisebenzisi amathuluzi afanele ukulandela abasebenzisi kulo lonke uhambo lwamakhasimende noma kungenjalo baphinda idatha futhi bethula amaphutha ekuhlaziyweni kwabo.
Ngokuya ngesihloko esithile, umbuzo owodwa owakhiwe ku-SQL ungathatha isikhathi esingaphezu kwehora ukufaka ikhodi nokubuyisa. Imibuzo ye-Ad hoc ilwela ukuveza ukuhlaziywa kwamakhasimende okusebenzayo ngoba impendulo yombuzo wakho wokuqala ingaba omunye umbuzo. Ufunda ukuthi amakhasimende angaphezu kwama-50% achofoza inkinobho yakho ye-CTA athola indlela eya ekhasini lokubhalisa, kepha ngaphansi kwamaphesenti angama-30 alawo makhasimende enza iphrofayili yomsebenzisi. Manje? Isikhathi sokubhala omunye umbuzo ku-SQL ukuqoqa esinye isiqeshana sephazili. Ukuhlaziywa akudingeki kube ngale ndlela.
Okukhombisayo yipulatifomu ehamba phambili ye-Customer Analytics eyenza amaqembu omkhiqizo nedatha akwazi ukudlula imikhawulo yamathuluzi wendabuko we-BI ukwenza izinqumo ngokuqonda ukusebenza komsebenzisi kuyo yonke indawo ethintwayo. Inkomba kuphela exhuma ngqo endaweni yakho yokugcina idatha, engadingi ukuphindwaphindwa, futhi inika amandla abasebenzisi bebhizinisi ukuphendula imibuzo eyinkimbinkimbi yokuhlaziya amakhasimende ngaphandle kokuthembela kumaqembu emininingwane noma i-SQL. Abaphathi bemikhiqizo nabakhangisi bangaqhuba imibuzo efanayo ngemizuzwana engathatha abahlaziyi bedatha amahora ukuyifaka. Ukuqonda kwedatha okusebenzayo izinyathelo ezimbalwa ezincanyana kude.
Isinyathelo 1: Chaza Izinhloso Zebhizinisi Lakho Namamethrikhi
Ukwakha imodeli yedatha esebenzayo, kufanele uqale uchaze izinhloso zebhizinisi lakho futhi usebenzise amacala. Ukuhlaziywa Kwekhasimende kuhloselwe ukushayela izinqumo zomkhiqizo kanye namaqembu wokumaketha, ngakho-ke buyela emuva emuva emiphumeleni onethemba lokuyizuza. Izinjongo kufanele zihambisane nezinhloso zebhizinisi eziyinhloko. Okukhomba kungalinganisa ukusebenza kwabo bonke abasebenzisi, abasebenzisi ngabodwana, nakho konke okuphakathi, ngakho-ke kufanelekile ukulandela izinkomba emazingeni amaningi. Okulandelayo, nquma amamethrikhi nama-KPI angakutshela uma uphumelela. Ezinye izibonelo zalokhu kungaba:
Khulisa ukuguqulwa komsebenzisi okusha
Nciphisa inani lababhalisile
Thola iziteshi zakho zokukhangisa ezisebenza kahle kakhulu
Thola amaphuzu wokushayisana ekuhambeni kwakho kokugibela
Lapho usuzinzile enhlosweni, yakha umbuzo othemba ukuwuphendula ngemininingwane yakho yomsebenzisi. Isibonelo, yithi uhlose ukukhulisa ukwamukelwa kwesici esisha somkhiqizo. Nazi izibonelo zemibuzo ongathanda ukuyiphendula njengoba uhlaziya ifaneli yakho yokubandakanya umsebenzisi:
Ngabe amakhasimende e-premium amukele umkhiqizo ngokushesha kunabasebenzisi bamahhala?
Kuthatha ukuchofoza noma izikrini ezingaki ukuze umsebenzisi afinyelele kumkhiqizo omusha?
Ingabe ukwamukelwa kwesici esisha kunomthelela omuhle ekugcineni umsebenzisi esikhathini esisodwa? Ezikhathini eziningi?
Uhlome ngale mibuzo nedatha ukuze uyiphendule, ungamba izinkulungwane zezenzo zomsebenzisi kulo lonke uhambo lwamakhasimende. Lungiselela ukuhlola okucabangayo ngokubonwa kwe-funnel enembile.
Isinyathelo 2: Landelela Uhambo Lwamakhasimende Wakho Nge-Multipath Journey Customer
Isici esiyinhloko sokukhomba yi- Uhambo lweKhasimende le-Multipath. Uhambo lwamakhasimende lukhonjiswa njengofanele wokuphindaphindeka, kukhombisa ukugeleza kwabasebenzisi ngezinqumo ezihlukile ngaphakathi kwesiza sakho noma uhlelo lokusebenza lweselula. Ukubona ngohambo kusiza amaqembu womkhiqizo nokumaketha ukuthola izindlela ezithile zokuziphatha namaphoyinti okuthinta ukushayela ukutholwa kwamakhasimende, ukugcinwa, noma ukukhwabanisa.
Ukuhlukanisa ifaneli ngokuqhubekayo kuvumela ithimba lakho ukuthi lithole amaphuzu ngqo wokungqubuzana lapho abasebenzisi baphambuka ekuziphatheni okuncanyelwayo noma baqhele kude nomkhiqizo ngokuphelele. I-Multipath Customer Journey ibuye ivumele inkampani ukuthi ibone imithombo yayo esemqoka yokuheha amakhasimende, ihlukanise izingxenye ezithile zomsele ukuqhathanisa ohambweni olufanayo lwamakhasimende. Amaqembu angabe eqondanisa imephu yawo yomgwaqo ukubhekana nezinkinga ngolwazi lomsebenzisi futhi ahlose ukuphindaphinda imiphumela yamakhasimende afanele.
Isinyathelo 3: Shayela ngokujulile ngamaqoqo namaPhrofayili
Lapho usuhlaziye izindlela abasebenzisi abahlanganyela ngazo nemikhiqizo yakho, iqembu lakho lokumaketha lingathatha isinyathelo emikhankasweni ebhekise kulawo makhasimende amathuba okuba nenani eliphakeme lempilo. Ukukhomba kukuvumela ukuthi uhlukanise abasebenzisi cishe nganoma isiphi isihlonzi esingacatshangwa ngokwakhiwa kwamaqoqo wokuziphatha. Ungathola:
Abasebenzisi abathola i-imeyili yabo yokuqala yokukhangisa ngoMsombuluko ekuseni banamathuba amaningi okubhalisa kunalabo abathola ukuxhumana kwabo kokuqala ngokuhamba kwesonto.
Izilingo zamahhala zithambekele ekuxebeni ngaphandle kokuthi kukhunjuzwe isikhumbuzi sokuthi icala lazo liphela ngosuku olulandelayo.
Uma iqembu lakho lokumaketha lifuna ukuthola imbumbulu, i-Indicative inikeza amaphrofayli womsebenzisi, iwavumela ukuthi asebenzise ama-personas athile kumakhasimende amahle kakhulu. Ngaphakathi kwedatha yakho yedatha kukhona ilog yazo zonke izenzo zomsebenzisi. Amaphrofayli womsebenzisi ku-Indicative akuthatha kulo lonke uhambo lwamakhasimende, kusukela ngokuchofoza kokuqala kuye kokuamuva kakhulu. Amasegmenti wangokwezifiso namaqoqo akhulisa ibha yokukhangisa okwenzelwe wena.
Kukhona igolide elifihlwe ngaphakathi kwendlu yakho yedatha, futhi i-Indicative ikusiza ukuthi uyikhiqize. Awudingi ulwazi lwekhodi noma ukwazisa ngengqalasizinda yedatha ukuthola imininingwane ewusizo yokuhlaziya. Konke okudingayo idemo yomkhiqizo wokukhomba nokufinyelela kudatha yomsebenzisi wenkampani yakho.
Zama iDemo Ekhomba
Tags: biidatha yebhidichurnamaqoqo wesikoukutholwa kwamakhasimendeizibalo zamakhasimendeikhasimende churnUkuhamba kwamakhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeukuhlukaniswa kwamakhasimendekuyakhombisaMultipath uhambo lwamakhasimendeuphondo we-multipathamaphrofayili
I-WordPress: Dala ama-Sidebars ngokuzenzakalela Esigabeni ngasinye
Abashicileli Bavumela Abakwa-Adtech Babulale Izinzuzo Zabo